Kedu ka m ga - esi melite HP SimplePass? - Ajụjụ
Isi > Ajụjụ > Simplepass anaghị arụ ọrụ - nzaghachi maka okwu a
Kedu ka m ga - esi melite HP SimplePass?
Họrọ aMfePassusoro (PIN, paswọọdụ, ma ọ bụ akara mkpisiaka) maka ịbanye na Windows na akaụntụ weebụ echekwara paswọọdụ gị, wee pịa Ọzọ. Soro ntuziaka ọ bụla na ihuenyo nke gosipụtara, wee pịa Ee ka ịbanye na Windows na ijiHP SimplePass. Pịa Emela.HP SimplePassbumelitena njikere iji.
Isiokwu a na-egosi otu esi edozi ma jiri HP SimplePass Fingerprint Reader na Windows 8.
SimplePass na-enye gị ohere ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ na ngwa dị nchebe site na ịpị akara mkpịsị aka gị karịa ịbanye aha njirimara na paswọọdụ gị. Onye na-agụ mkpịsị aka ga-enyocha mkpịsị aka gị ma jiri mkpịsị aka mkpịsị aka nyocha iji nyochaa njirimara gị. Soro usoro ndị a iji melite mkpịsị aka gị na SimplePass.
Site Windows 8 Start ihuenyo, pịnye SimplePass. Họrọ HP SimplePass site na nsonaazụ amara nke To setịpụrụ SimplePass, pịa Bido. Swipe mkpịsị aka gị ahọpụtara n’elu ihe mmetụta.
Njikọ ahịa oyi
Soro ntuziaka ihuenyo, wee swipe ma ọ bụrụ na kpaliri. Ozi ndebanye aha ga-apụta. Iji wụnye SimplePass maka Iji Windows banye, pịa Ee.
Pịa Emela. You nwere ike iji SimplePass zọpụta gị nzere nzere maka ngwa na weebụsaịtị. Ihe nchọgharị ndị akwadoro gụnyere Internet Explorer, Firefox, na Chrome.
Na ihe nchọgharị weebụ, ịnyagharịa na saịtị echedoro na ịnwere akaụntụ. A ga-egosipụta ozi SimplePass. Iji mee ka SimplePass cheta weebụsaịtị niile ị banyere n'ime ya n'ọdịnihu, pịa More Nhọrọ, wee pịa Cheta weebụsaịtị niile.
Banye na ebe nrụọrụ weebụ echekwara, gaa na weebụsaịtị ahụ, wee pịgharịa aka gị na ihe mmetụta iji banye na akaụntụ gị. My LaunchSite na-enye nnweta ohere niile na ebe nrụọrụ weebụ ị debara aha gị. Mepee SimplePass ma swipe mkpịsị aka gị ịbanye.
A ga-edebanye aha na weebụsaịtị gị niile n'okpuru taabụ My LaunchSite. Pịa akara ngosi saịtị iji mepee weebụsaịtị ahụ. Iji wepu aha debara aha na My LaunchSite, soro usoro ndị a.
Meghee SimplePass wee banye. Pịa My Vault taabụ, wee họrọ weebụsaịtị ị chọrọ iwepụ. Pịa Hichapụ wepụ weebụsaịtị.
Soro usoro ndị a ka ị gbanwee ma ọ bụ hichapụ mkpịsị aka SimplePass. Iji gbanwee mkpịsị aka gị, buru ụzọ mepee SimplePass ma banye. Pịa Gaa na Ntọala Ntọala m, wee pịa Gbanwee.
Họrọ Jiri mkpịsị aka m na-agụ dị ka m SimplePass, wee pịa Ọzọ. Mgbe a kpaliri ịchekwa mkpịsị aka ọhụrụ gị, swipe mkpịsị aka gị. Hichapụ Ka ịchekwa mkpịsị aka gị, pịa taabụ Ntọala m, pịa Hichapụ, wee pịa Kwenye.
Nke a ga-ehichapụ weebụsaịtị niile edebanyere maka mkpịsị aka ahụ. Soro usoro ndị a iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala mkpịsị aka mkpịsị aka ma ọ bụ HP SimplePass ma ọ bụ Iji budata mmelite na weebụsaịtị HP, mepee ihe nchọgharị weebụ gị, gaa na support.hp.com, pịa Software & Ọkwọ ụgbọala, wee soro ntuziaka ihuenyo iji chọta nbudata dị na kọmputa gị Pịa Ọkwọ ụgbọala - kiiboodu, useké, na Ngwaọrụ Ntinye.
Chọta Ndaba Fingerprint Sensọ Driver, wee pịa Download. Soro ntuziaka ihuenyo iji budata ma wụnye ọkwọ ụgbọ ala. Pịa Security Software.
Chọọ Chọọ HP SimplePass Identity Protection Software, wee pịa Download, wee soro ntuziaka gen na ihuenyo iji budata ma wụnye ngwanrọ ahụ. Nwere ike ịchọta isiokwu ndị ọzọ na-enye aka na hp.com/SupportVideos na na ntanetị YouTube anyị youtube.com/HowTo4U.
Olee otu m ga esi dozizi ihe mkpisiaka aka na HP Elitebook m?
HPPC eji ede ihe - Nchọpụta nsogbu aMkpisiaka Reader(Windows 7, Vista, XP)
Lelee maka nkwado Windows.
Hichaa yaakara mkpisiaka.
Melite ọkwọ ụgbọala ahụ.
Melite yaakara mkpisiakangwanrọ
Chọta ndị ọkwọ ụgbọala ọhụụ ma ọ bụrụ na ị gbanwere sistemụ arụmọrụ.
ele ihe anya na-eme redirecting
Kedu ka m ga esi dozi mkpisi aka m na HP Envy?
HP anyaukwuPC eji ede ihe -MkpisiakaỌrụ Na-akwụsị Workingrụ Ọrụ Mgbe Tọgharia Sistemu a rụrụ
Nanyagharịa C: \_ Windows \_ System32 \_ WinBioDatabase nchekwa.
Mepee folda ahụ.
Hichapụ faịlụ niile dị na folda a.
Mechie Windows Explorer.
Malitegharịa ekwentị ahụ na kọmputa. Namkpisiakaarụ ọrụ weghachiri eweghachi.
Kedu ihe kpatara hp simplepass anaghị arụ ọrụ na Windows 10?
Otu awa gara aga, echere m na m nwere ike iwepụ HP SimplePass 8.01.39, mana m meghere Windows Uninstall ugbu a na HP SimplePass 8.01.39 ka dị ma Windows Uninstall ka na-enye m ozi ahụ 'chere ruo mgbe mmemme ahụ gwụchara iwepu'.
Kedu ihe mere hp m kacha jiri ghara ịmata mkpịsị aka m?
Mgbe m kwalite na Windows 10, enweghị m ike ịnweta HP SimplePass m iji mata mkpịsị aka m swipe na nbanye ma enweghị m ike ịnweta ngwa iji gbaa ọsọ. Enyemaka ntanetị na-egosi na a ga-ebufe ma ọ bụ tinye ndị ọkwọ ụgbọala niile na Windows 10. Aro ọ bụla? Ekpochiri thread a.
Kedu ihe kpatara Windows Hello na mfe pass anaghị arụ ọrụ?
Ihe abụọ dị mfe na windo Ndewo mara akara mkpisiaka agụ mgbe m na-edozi ya, mana mgbe ị na-ebigharị ma na-achọ ịbanye na ọrụ mkpisiaka - ọ naghị eme ka ọ na-arụ ọrụ. Agbalịrị m aro niile na ntuziaka a.
Kedu usoro Windows 10 maka usoro 8?
Usoro 8 HP SImplePass mmemme V8.01.46A maka Windows 10 dị ugbu a: sp71729 HP SimplePass V8.01.46A W7-W10 32 / 64bit. Ọkwọ ụgbọala na mbụ, reboot ma banye, ihe omume nke abụọ, reboot na abanye. Likely nwere ike iji Windows 8.1 ndaba ọkwọ ụgbọala.